Mianara Texas Holdem Poker - Drafitra fahombiazana - Финансовый форум | Всё про деньги, финансы, инвестиции, заработок
Форум о заработке и инвестициях	Список форумов Форум о личных финансах Личностный рост
Mianara Texas Holdem Poker - Drafitra fahombiazana
Зарегистрирован: 25 окт 2019, 12:33
Сообщение Yortvandy8899 » 21 янв 2020, 01:04
Mitombo ny firehetam-po manerantany amin'ny Texas Hold'em poker. Ny fahombiazan'ny mpilalao poker tanora ao amin'ny World Series of Poker dia nahasarika ny sain'ny tanora eran'izao tontolo izao .. Jonathan Duhamel, mpianatra amin'ny alàlan'ny mpianatra amin'ny haino aman-jery matihanina dia nandray anjara tamin'ny Poker 2010 World Main Event tamin'ny Ilay 22 taona izay nandresy efa ho $ 9 tapitrisa dia nanampy fa ny mpilalao voalohany valo izay mbola ao anatin'ny faha-roa taonany dia samy nahazo fandresena indray mandeha. Ary azonao jerena ny antony maha-malaza ny fangatahana an'i Texas Holdem Poker. Manaraka ny dian'ny mpisehatra lehibe hafa toa an'i Daniel Neagreanu, Phip Hellmuth, i Duhamel. Chris Moneymaker sy Peter Eastgate, izay niha-nanana andraikitra lehibe tamin'ny fikomiana lehibe tao amin'ny World Series of Poker, dia olo-malaza ankehitriny sy ilay filokana malaza izay manome aingam-panahy ireo mpandresy. Fifaninanana Poker izay te handinika ny tontolon'ny Texas Hold'em poker gclub4laos.com
Na dia vitsy aza ireo mpilalao poker nahazo tombony sy laza dia avy hatrany World Series of Poker, World Tour of Poker na Ny European European Poker Poker Championship dia dingana fianarana lava sy lafo. Ho an'ireo manam-pahaizana poker, ny drafitry ny fampandrosoana poker fototra dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny paikadin'izy ireo.
Ny dingana fianarana dia manomboka amin'ny fahatakarana ireo fototra poker. Ireo fototra ireo dia misy ny fahalalana ny laharam-pifandraisana poker, mahatakatra ny foto-kevitra momba ny filokana, ny fisavana, ny fampidirana ny tribbling vaovao ary ny fikorotanana ary ny famoronana. Ny fahaizana manisa ny vinavina sy ny mety ho matematika dia fahaiza-manao lehibe. Fa ho an'ny mpilalao maro tsy mahazo fitahiana, koa ilaina ny fahatakarana fototra ny tanjaky tanana Ny fahafantarana ny tanana mahery ary malemy ilay tanana ary ny fahafahana manao karatra miaraka amina tanana dia fahaiza-manao lehibe. Raha tsy misy fahalalana sy fahaiza-manao ambany indrindra dia ho sarotra ny fahombiazan'ny ambaratonga poker rehetra.
Mampalahelo fa misy maika be ankehitriny mba hahatontosa azy .. Vitao fotsiny! Tsy manam-paharetana ny faharetana, raha ny tokony ho izy dia tsy misy. Ny hadisoana lehibe indrindra azon'ny mpilalao vaovao dia ny mihazakazaka mankany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny casino, poker, na efitrano fandraisam-bahiny poker toy ny PokerStars Party, Party, na Full Tilt Poker. Ary manomboka milalao amin'ny vola tena izy Ity dia mety ho fahadisoana lafo vidy kokoa.
Ny fizotran'ny fianarana sy ny fampandrosoana poker dia tokony hanomboka amin'ny alàlan'ny filalaovana poker ao an-trano ao anatin'ny tontolo ambany sy miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana.Amin'ny voalohany, ny tsatoka dia tokony hamerana amin'ny filalaovana zon'olom-piraisana na vola ambany. Ny vondrona Poker dia tokony hampiditra ny mpilalao izay mitovy amin'ny ambaratonga fianarana, farafaharatsiny mandra-pahatakarany ny fitsipiky ny fomba rehetra sy ny fomba. Amin'ireo ambaratonga fototra ireo, ny mpilalao dia mety te-hizara fahalalana mba hanatsarana ny fahaizany haingana. Amin'ity ambaratonga ity dia tokony hanomboka mahazo trano famakiam-boky poker amin'ny fampianarana sy DVD, DVD izy ireo. Ireo loharanom-pampianarana ireo dia tokony hanome anao torohevitra fototra sy fampahalalana momba ny paikady poker sy paikady mandroso
Вернуться в «Личностный рост»